Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Mbola voka-dratsin’ny pesta koa itony
Inty sy nday: Mbola voka-dratsin’ny pesta koa itony
Tsy ampy mihitsy ny fanazavana ny fivoaran’ny raharaha momba ny famongorana na fifehezana ny pesta eto Madagasikara ka niteraka fandraisana fepetra henjana izay mitarika faty antoka goavana ho antsika. Fantatra mantsy izao fa fanafarana entana na “commande” mitentina 3 tapitrisa dôlara no nafoy izay tokony nafarana amin’ny orin’asa iray afa-kaba eto Madagasikara. Vondrom-barotra any ivelany efa mpanafatra entana avy amin’io orin’asa afa-kaba eto an-toerana io no voatery nanafoana io fanafarana io noho ny tsy fahalavorarian’ny serasera sy fampitam-baovao mbamin’ny fanazavana avy amin’ny mpitondra fanjakana Malagasy sy noho ny tsy fandraisana andraikitra mifanandrify amin’izany avy amin’ireo masoivohom-panjakana Malagasy any ampitan’ny ranomasina any.
Ankoatra ny faty antoka vokatr’ity aretina pesta ity noho ny fihemoran’ireo mpizahatany tokony ho avy teto izany dia ity fanafoanana ny fanafarana entana avy amin’ny orin’asa afa-kaba iray ity no isan’ny ako ratsy naterak’izao tsy fahaizan’ny fitondram-panjakana mampita ny fifandraisana sy ny fanazavana izao any ampita.
Vondrom-barotra atsy amin’ny Nosy Maorisy no voalazan’ny mpandraharaha Tiana Andia fa nanafoana an’io fanafarany entana eto io satria nisy teratany frantsay avy eto Madagasikara niazo ny Nosy Maorisy no fantatra rehefa tonga tany fa tratry ny aretina pesta, nefa hoe vita fitiliana ara-dalàna talohan’ny nialany teto Madagasikara, ary io fitiliana io dia nilaza fa “tsy misy olana amin’ny aretina pesta izy”. Izany hoe tsy azon’ny any ivelany antoka koa izany ny vokatry ny fitiliana nataon’ny tompon’andraikitra teto Madagasikara, ka izao niteraka famoizana fanafaran’entana hatramin’ny 3 tapitrisa dôlara izao. Heverina aza, hoy i Tiana Andia fa mety hitarika ny fikatonan’ity orin’asa afa-kaba ity mihitsy izany olana izany, izay ho vesatra ho an’ny firenena koa avy eo.
Mety efa nisy orin’asa hafa nianjadian-javatra toa izany koa ange vokatr’io aretina pesta io any ho any fa tsy re e!
Tsy misy lesona azo tsoahina ihany ve?